warqad acrylic cad Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha - Shiinaha Warshad xaashi cad oo looxa
Xaashida looxa waxaa lagu tuuray xaashi acrylic ah iyo xaashi acrylic ah oo la soo saaray.
Tuur xaashida looxa: culeyska molikal sare, qallafsanaan aad u fiican, xoog iyo caabin kiimiko aad u fiican. Saxan noocan ah waxaa lagu gartaa wax soo saar dufcadeed oo yar, dabacsanaan aan la barbardhigi karin ee nidaamka midabka iyo saamaynta muuqaalka dusha sare, iyo sooc sooca oo dhammaystiran, oo ku habboon ujeedooyin gaar ah oo kala duwan
xaashida looxa loo yaqaan 'opal acrylic sheet'
Xaashida loo yaqaan 'Opal Acrylic Sheet' waxay ku habboon tahay codsiyada u baahan quruxda iyo hufnaanta acrylic halkaas oo dhaqan ahaan looga baahan yahay wax soo saar saameyn sare leh. Waxay ilaalisaa midabkeedu cad yahay oo midabaysan ka hor iyo ka dib been abuurka, iyada oo la siinayo qalabyo isla markaana soo bandhigaya xarrago la doonayo oo luntay iyadoo saamayn kale lagu beddelay caagagga oo bixiya muuqaal "warshadeed" ah.
White acrylic waxay leedahay astaamo badan oo faa iidooyin leh oo ka dhigaya sheyga ugu fiican ee alaabooyin kala duwan. Tabeelooyinka, laydhka, aquarium-ka, daahyada, iyo alaabooyin kale oo badan oo alaabta guryaha ah ayaa adeegsada acrylic cad si loo gaadho dhammaystir qurux badan oo qurux badan oo soo jiita macaamilka.
Xaashida looxa waxaa loogu magac daray xaashida 'PMMA sheet', 'Plexiglass' ama "sheet Organic glass sheet". Magaca kiimikada waa Polymethyl methacrylate. Acrylic wuxuu hayaa waxyaabaha jirka ka kooban ee balaastigga ah sababtoo ah daahfurnaanta wanaagsan ee dhalaalaysa & hufan sida madarad, waxaa lagu ammaanay inay tahay "Boqoradda Caagagga" oo ay aad ugu riyaaqeen hawlwadeennada.
Ereyga "acrylic" waxaa loo isticmaalaa alaabooyinka ay ku jiraan walax laga soo qaaday acrylic acid ama isku xirnaan la xiriirta. Badanaa, waxaa loo isticmaalaa in lagu sharaxo caag cad oo muraayad u eg oo loo yaqaan poly (methyl) methacrylate (PMMA). PMMA, oo sidoo kale loo yaqaan 'acrylic glass', waxay leedahay astaamo ka dhigaya xulasho wanaagsan alaabooyin badan oo laga yaabo inay ka samaysan yihiin muraayad.
warqad acrylic cad cad translucent
1.hal pc xaashi xaashiyaha looxa:
daboolay warqad farshaxan ama filimka PE ee labada dhinacba, filimka daboolan oo aan lahayn wax calaamadeena isku dhafan ah.
2.la sariirtaada rar xamuul Bulk:
2 tan halkii marbaal, ku isticmaal santuuqa alwaax iyo baaldiyo bir ah xagga hoose,
oo ay ku jiraan baakadaha filimka ee baakadaha ku wareegsan oo dhan si loo hubiyo amniga gaadiidka.
3.Xirxirida weelka buuxa:
20-23 tan (qiyaastii 3000pcs) oo ah weel 20 fuud ah oo leh 10 -12pallets.
Xaashida acrylic-ka cad waa midabka xaashida looxa lagu shubay. Acrylic, oo badanaa loo yaqaan 'plexiglass' gaar ah. Cilmi-baarista iyo horumarka akrilik waxay leedahay taariikh ka badan boqol sano. Polymerizability ee acrylic acid waxaa la ogaaday 1872; polymerizability-ka methacrylic acid waxaa lagu yaqaanay 1880; habka isku-dhafka ee propylene polypropionate waxaa lagu dhammaystiray 1901; habka macmalka ah ee kor lagu soo sheegay ayaa loo adeegsaday isku dayga wax soo saarka warshadaha sanadkii 1927; warshadaha methacrylate waxay ahayd 1937 Horumarinta wax soosaarku waa guul, sidaasna waxay ku gashay soosaarid ballaadhan. Intii lagu guda jiray Dagaalkii Labaad ee Adduunka, adkayntiisa wanaagsan iyo gudbinta iftiinka, acrylic waxaa markii ugu horreysay loo adeegsaday muraayada hore ee diyaaradda iyo aaladda muraayadda aragtida ee taksiga darawalka taangiga. Dhalashada barkadda qubeyska ee loo yaqaan 'acrylic bath' markii ugu horreysay adduunka ee 1948 waxay calaamadisay taariikh cusub oo ku saabsan adeegsiga acrylic.